Fizarana tsenan'ny fizahantany: Gaga be i Chile
Home » Travel Associations News » Fizarana tsenan'ny fizahantany: Gaga be i Chile
Laharana iray amin'ny fahatongavan'ireo mpizahatany tanteraka any Amerika atsimo no mitana ny toerana faharoa an'i Shily amin'ny ankapobeny.
Chile dia nanana fampisehoana tena tsara tamin'ny resaka fahatongavan'ireo mpizahatany tato anatin'ny taona vitsivitsy. Tao anatin'izay folo taona lasa izay dia tonga 150% ny salanisan'ny fizahantany iraisam-pirenena tany Chili.
Tamin'ny taona 2016, nahavariana ny anjaran'ny tsena rezionaly. Laharam-pahatongavan'ireo tonga tonga tany Amerika atsimo no mitana ny laharana faharoa an'i Chile:
• Brezila (6.5 tapitrisa)
• Shily (5.6 tapitrisa)
• Arzantina (5.5 tapitrisa)
• Peroa (3.7 tapitrisa)
• Kolombia (3.3 tapitrisa)
• Orogoay (3.0 tapitrisa)
Ekoatera (1.4 tapitrisa)
Raha dinihina ny tanjaky ny marika fizahan-tany amin'ny manodidina an'i Chile, dia mazava fa mandoa vola ny ezaka fampiroboroboana ny dia. Miankina amin'ny mpifanolo-bodirindrina aminy ny fanaingoana ny tsenan'ny tsena, toy ny any amin'ny ankamaroan'ny firenena. Raha ny raharaha Chili dia i Arzantina sy Brezila. Ny tarehimarika manodidina dia hampiseho fa 45% sy 10% ny mpizahatany Arzantina sy Breziliana (isanisany) no totalin'ny fitsidihan'ny vahiny ny firenena.
Amin'ny 2017, mitohy hatrany ny fiakaran'ny zava-bitan'i Shily. Hatramin'ny volana aogositra dia mpitsangatsangana iraisam-pirenena 4.3 tapitrisa no nitsidika an'i Chile. Fisondrotana 18.3% izany raha oharina amin'ny famakiana firaketana an-tsoratra 2016. Na dia mitohy aza ny fiankinan'ny Chile amin'ny toekarena toa an'i Brezila sy i Arzantina, dia misy ny fotoana ahafahan'ny tsena halavirana maharitra hahazo ny anjarany eny an-tsena raha toa ka manandrana manova ny portfolio miditra anatiny i Chile. Fantatra amin'ny natiora sy traikefa niainany nandritra ny dia i Chile. Mbola misy be dia be ny fotoana anaovana akany toa ny fanaovana vorona, ny jono manidina, ny fitsangantsanganana ataon'ny fianakaviana, ny tantely, ny ski, ny insentif, ny vazimba teratany, ny fizahan-tany momba ny sakafo sy divay.
Tapaka ny fizarana tsena 2016, izay hampiseho fa ireo tonga avy any Arzantina, Brezila, Peroa, Etazonia ary Kolombia dia manoratra 72% amin'ireo tonga rehetra ao amin'ny firenena. Amin'ny tsena mahazatra an'i Chili, dia mitombo ny fitomboana. Ohatra, ny isan'ny mpitsidika sinoa dia nitombo avo roa heny (+ 49.3%) tamin'ny taona lasa. Frantsa, Aostralia ary Angletera dia mirehareha fiakarana amin'ny isa inbound 2016 an'ny + 10.2%, +10.8% ary + 10.9%.
Ny fijerena ny fandaniam-bola amin'ny carte de crédit vahiny dia nanambara fa taorian'ny nandalovany vanim-potoana nilamina tamin'ny 2013 sy 2014 dia nandany vola bebe kokoa tato ho ato ny mpizahatany. Niakatra $ 1,5 miliara dolara tamin'ny 2013 sy 2014, nitombo be ny fandaniana tamin'ny 2015 ary tamin'ny 2016 indray.
Ny fandaniana amin'ny carte de crédit vahiny / taona amina miliara USD:
(loharano: Transbank. Azafady mba mariho ihany koa fa ny kajy dia miorina amin'ny CLI Shiliana / Etazonia Oktobra 2017 ny tahan'ny fifanakalozana izay mitovy amin'ny 42,7 USD ho an'ny CLP 1.)
Na eo aza ny fiakarana mampiavaka an'i Chile ho iray amin'ny toerana itadiavana an'i Amerika atsimo dia misy teboka roa mbola tokony hodinihina.
Ny habetsaky ny fitomboan'i Shily dia miankina amin'i Brezila sy Arzantina. Araka ny fomban-drazana, fironana lehibe ho an'ny roa tonta ny fivarotana antsinjarany. Androany ny famakafakana ny fandaniana amin'ny carte de crédit dia manambara fa mandany bebe kokoa amin'ny hetsika fizahan-tany any Chile ireo tsena ireo. Ny ezaka fampiroboroboana ataon'ny tsy miankina sy ny daholobe izao dia miomana amin'ny famoronana fiovan'ny fahazarana mandany vola handrisihana ny tolotra fizahan-tany bebe kokoa.
Ny fandrosoana dia tanterahina amin'ny tsena sarotra lalovana toa an'i Etazonia. Teo anelanelan'ny 2015 sy 2016, nilatsaka -5% ny tarehimarika amerikanina ankapobeny tany Etazonia atsimo. Na dia vitsy aza ny olom-pirenena amerikana nandeha tany Amerika atsimo, dia nahasarika mpizahatany 12% bebe kokoa avy any amin'io tsena io i Chili tamin'ny 2016.
Tamin'ny 2013, ny fahatongavan'ireo tonga avy tany Etazonia dia nidina -2,7% raha oharina tamin'ny taona 2012. Ny ezaka fampiroboroboana sy ny fiaraha-miasa stratejika miaraka amin'ny sehatra tsy miankina dia nanampy an'i Chili hampiakatra isa eo anelanelan'ny 2013 sy 2016 eo ho eo amin'ny 7.3%.
Nandray anjara lehibe tamin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany any Chili ny sidina. Tamin'ny taona 2017 fotsiny dia nisy 15% ny fisian'ny seza fiaramanidina avy any Etazonia ka hatrany Shily. Ny mpiara-miasa amin'i Turismo Chile, LATAM Airlines dia nampitombo ny fahaizany avy any Etazonia ka hatrany Shily 6%. Nandritra izay dimy taona lasa izay, ny hetsika toy ny Discover Chile, nokarakarain'ny Turismo Chile sy LATAM, dia nanampy tamin'ny fanamafisana ny fifandraisana B2B teo amin'ny indostrian'ny fizahan-tany amerikana sy Shiliana. Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny tsena sy famakafakana momba ny tarehimarika miditra ao Shily, mifandraisa amin'ny ekipan'ny tsenan'i Turismo Chile.
Ho famaranana, ny fahombiazan'ny fizahan-tany any Shily dia manampy ny firenena hiroborobo mankany amin'ny toerana tranainy indrindra any Amerika atsimo. Androany, ary raha ny momba ny fizahantany dia mitombo amin'ny ambaratonga mbola tsy nisy toy izany i Chile. Ny Undersecretary ny fizahantany dia nanombana fa hahatratra ny fitsidihan'ny fizahantany 6,7 tapitrisa i Chili amin'ny faran'ny taona 2017. Miaraka amin'ny fahasamihafana ara-kolontsaina sy ara-jeografika marobe i Chili dia mazava fa mbola betsaka ny mety ho fizahan-tany mbola tsy voatanisa ao amin'ny firenena . Ho an'ny indostrian'ny fizahantany iraisam-pirenena dia tonga amin'ny endrika fampandrosoana ny vokatra vaovao.
Ny toekarem-pizahantany ao amin'ny firenena dia maniry fatratra ny fiaraha-miasa vaovao izay hanampy amin'ny fanitarana ny fanomezana nentim-paharazana izay matetika loatra. Ny toetr'andro ara-politika azo antoka any Chili dia miantoka ny fitoniana sy ny fialantsasatra tsy misy risika ao amin'ny firenena iray izay voajanahary noho ny natiora sy ny fotoana ahafahana manao trafika.
Hetsika Krismasy sy Taom-baovao tsy manam-paharoa ao amin'ny “Hello Kitty Land Tokyo”
FITUR 2018 dia mandroso ny atin'ny faritra Fiturtech Y